Translations < Myanmar (Burmese) < Twenty Eleven < GlotPress — WordPress
Translation of Twenty Eleven: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (133) • Untranslated (1) • Waiting (0) • Fuzzy (1) • Warnings (0)
↑	 The 2011 theme for WordPress is sophisticated, lightweight, and adaptable. Make it yours withacustom menu, header image, and background -- then go further with available theme options for light or dark color scheme, custom link colors, and three layout choices. Twenty Eleven comes equipped withaShowcase page template that transforms your front page intoashowcase to show off your best content, widget support galore (sidebar, three footer areas, andaShowcase page widget area), andacustom "Ephemera" widget to display your Aside, Link, Quote, or Status posts. Included are styles for print and for the admin editor, support for featured images (as custom header images on posts and pages and as large images on featured "sticky" posts), and special styles for six different post formats.	 WordPress အတွက် ၂၀၁၁ အခင်းအကျင်းသည် ေခတ်ဆန် ေပါ့ပါး၍ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲရန် လွယ်ကူသည်။ စိတ်ြကိုက် မီနူး၊ ေခါင်းစီးရုပ်ပံုနှင့် ေနာက်ခံတို့ကို သင့်စိတ်ြကိုက်ြပုလုပ်ြပီး -- အေမှာင်နှင့် အလင်း အေရာင်အတွဲအစပ်နှစ်မျိုး၊ ချိတ်ဆက်လိပ်စာ စိတ်ြကိုက်အေရာင် နှင့် ေနရာချပံုစံ သံုးမျိုးကိုေရွးချယ်နိုင်သည့် အခင်းအကျင်း ေရွးချယ်ြပင်ဆင်ရန်သို့ ထပ်မံသွားေရာက် ြပင်ဆင်နိုင်သည်။ နှစ်ဆယ် ဆယ့်တစ်တွင် သင့်အေကာင်းဆံုး ေရးသားချက်များ၊ များြပားလှေသာ ဝစ်ဂျက်များ (ေဘးဘား၊ ေအာက်ေြခ ဧရိယာသံုးခုနှင့် ရှိုးေက့စ်စာမျက်နှာ ဝစ်ဂျက် ဧရိယာ) ၊နှင့် သင့် စကားချပ်၊ ချိတ်ဆက်လိပ်စာ၊ ကိုးကားချက်စာပိုဒ်၊ သို့မဟုတ် အေြခအေနြပ စာမူတို့ကို ေဖာ်ြပေပးမည့် စိတ်ြကိုက်ြပုြပင်နိုင်ေသာ "ေပါ်ပင်အေြကာင်းအရာ" ဝစ်ဂျက်တို့ကို ေဖာ်ြပထားရန် သင့်ေရှ့စာမျက်နှာကို ရှိုးေက့စ် စာမျက်နှာတစ်ခု အြဖစ်သို့ ပံုစံေြပာင်ေပးမည့် ရှိုးေက့စ် စာမျက်နှာ စံပံုစံ တစ်ခု တစ်ပါတည်း တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ အထူးဦးစားေပး ရုပ်ပံုများ ( စာမူများနှင့် စာမျက်နှာများတွင် စိတ်ြကိုက် ေခါင်းစီးပိုင်း ရုပ်ပံုအြဖစ်နှင့် အထူးဦးစားေပး "အေရးြကီး" စာမူများတွင် ရုပ်ပံုအြကီးအြဖစ်သံုးသည် ) ၊နှင့် ၆ မျိုးေသာ စာမူပံုစံများအတွက် ကွဲြပားေသာ အထူး စတိုင်များ၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူအတွက် အယ်ဒီတာနှင့် ပံုနှိပ်ြခင်းအတွက် စတိုင်များ ပါဝင်ပါသည်။	 Details
WordPress အတွက် ၂၀၁၁ အခင်းအကျင်းသည် ေခတ်ဆန် ေပါ့ပါး၍ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲရန် လွယ်ကူသည်။ စိတ်ြကိုက် မီနူး၊ ေခါင်းစီးရုပ်ပံုနှင့် ေနာက်ခံတို့ကို သင့်စိတ်ြကိုက်ြပုလုပ်ြပီး -- အေမှာင်နှင့် အလင်း အေရာင်အတွဲအစပ်နှစ်မျိုး၊ ချိတ်ဆက်လိပ်စာ စိတ်ြကိုက်အေရာင် နှင့် ေနရာချပံုစံ သံုးမျိုးကိုေရွးချယ်နိုင်သည့် အခင်းအကျင်း ေရွးချယ်ြပင်ဆင်ရန်သို့ ထပ်မံသွားေရာက် ြပင်ဆင်နိုင်သည်။ နှစ်ဆယ် ဆယ့်တစ်တွင် သင့်အေကာင်းဆံုး ေရးသားချက်များ၊ များြပားလှေသာ ဝစ်ဂျက်များ (ေဘးဘား၊ ေအာက်ေြခ ဧရိယာသံုးခုနှင့် ရှိုးေက့စ်စာမျက်နှာ ဝစ်ဂျက် ဧရိယာ) ၊နှင့် သင့် စကားချပ်၊ ချိတ်ဆက်လိပ်စာ၊ ကိုးကားချက်စာပိုဒ်၊ သို့မဟုတ် အေြခအေနြပ စာမူတို့ကို ေဖာ်ြပေပးမည့် စိတ်ြကိုက်ြပုြပင်နိုင်ေသာ "ေပါ်ပင်အေြကာင်းအရာ" ဝစ်ဂျက်တို့ကို ေဖာ်ြပထားရန် သင့်ေရှ့စာမျက်နှာကို ရှိုးေက့စ် စာမျက်နှာတစ်ခု အြဖစ်သို့ ပံုစံေြပာင်ေပးမည့် ရှိုးေက့စ် စာမျက်နှာ စံပံုစံ တစ်ခု တစ်ပါတည်း တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ အထူးဦးစားေပး ရုပ်ပံုများ ( စာမူများနှင့် စာမျက်နှာများတွင် စိတ်ြကိုက် ေခါင်းစီးပိုင်း ရုပ်ပံုအြဖစ်နှင့် အထူးဦးစားေပး "အေရးြကီး" စာမူများတွင် ရုပ်ပံုအြကီးအြဖစ်သံုးသည် ) ၊နှင့် ၆ မျိုးေသာ စာမူပံုစံများအတွက် ကွဲြပားေသာ အထူး စတိုင်များ၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူအတွက် အယ်ဒီတာနှင့် ပံုနှိပ်ြခင်းအတွက် စတိုင်များ ပါဝင်ပါသည်။
Sidebar Template	 ဆိုဒ်ဘား တန်းပလိတ်	 Details
Showcase Template	 ရှိုးေက့စ် တန်းပလိတ်	 Details
Next <span class="meta-nav">&rarr;</span>	 နောက်အသစ် <span class="meta-nav">&rarr;</span>	 Details
နောက်အသစ် <span class="meta-nav">&rarr;</span>
<span class="meta-nav">&larr;</span> Previous	 <span class="meta-nav">&larr;</span> အရင်တစ်ပုဒ်	 Details
<span class="meta-nav">&larr;</span> အရင်တစ်ပုဒ်
Recent Posts	 လတ်တ‌လော စာမူများ	 Details
Featuring: %s	 အထူးအစီအစဉ် : %s	 Details
အထူးအစီအစဉ် : %s
Featured Post	 အထူးစာမူ	 Details